MADAXWEYNE RIYAALE MIYUU IS CASILAYAA? | Toggaherer's Weblog
Madaxweyne Rayaale miyuu is casilayaa?
Wasiirka Hawlaha Guud ee Somaliland Siciid Sulub Maxamed, ayaa ka waramay kulamo ay dhexmaray xubno Wasiiro ah oo uu ka mid yahay iyo Xildhibaano ka tirsan Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE, kuwaasoo la xidhiidha furdaaminta xaaladda siyaasaddeed ee haatan dalka ka taagan.
Wasiirka oo uu xalay xog-waraysi kooban la yeeshay Wargeyska Ogaal, waxa uu beeniyay warar shalay gelinkii dambe ilaa xalay laysla dhexmarayay oo sheegaya in Madaxweyne Rayaale qorshaynayo inuu iscasilo iyo inuu xanuunsanayo, sidaa darteedna uu u baxayo safar dibaddeed. Waraysigaasina wuxuu u dhacay sidan;
Ogaal: Wasiir dhawaan adiga iyo wasiirka ganacsigu waxaad kullan kula yeelateen gurigaaga xildhibaano ka tirsan xisbiga KULMIYE, waxaanad kala hadashay arrin la xidhiidhey sidii wadda hadal la isugu keeni lahaa hogaamiyayaasha UDUB iyo KULMIYE, arrintaa bal ka waran?
Wasiirka: Kulankaasi waxa uu ahaa kulan saaxiibtinimo oo xildhibaanadaa Golaha Wakiillada ka tirsan ee uu ku jiro Gudoomiye ku xigeenka labaad iyo labadayada wasiir kulan saaxiibtinimo ayaa na dhexmaray. Waa run oo casuumadda kulankaas anaga ayaa laheyn oo u fidinay waaney naga aqbaleen. waanu wadda qadayney waanu wadda fadhiisaney, kulan saaxiibnimo oo kolay marxalada maanta dalku ku jirana aanu kaga sheekaysaney ayuu kulankaasi ahaa.
Ogaal: Laakiin, ujeedadiisu waxay ahayd oo aad xildhibaanadaana u sheegteen inaad ka wadda shaqeysaan sidii khilaafka loo dhameyn lahaa, kulan danbana bari ayaad leedihiin sida na soo gaadhay, markaa arrinta aad bilowdeen ma mid xaga Madaxweynaha ka timi oo uu idiin diray baa?
Wasiirka: Waxa weeye, xildhibaanada la soo doortey ee qaranka iyo anaga oo wasiiradii ah, labadayada qoloba xil-baa na saaran, qof qof iyo guud ahaanba wixii khilaaf ah ama dhib ah ee dalka ka jira inaanu sidii aanu u khafiifin lahayn ama uga wada hadli laheyn inaanu iska arragno weeye oo wax gidaar ah oo noo kala dhexeeyaa ma jirin. Markaa, anagaa xildhibaano ahaan iyo wasiiro ahaan is codsaney, waananu wadda fadhiisanay wixii dalka ka jirana xilbaa naga wadda saaran oo xilkayagii qaranimo ee labadayada Goleba masuuliyadu naga saaran tahay ayaanu gudaneynay, arrimaha Xisbiyaddu isku hayaan iyo arrimaha kale ee xaalada taagan intaba masuuliyadii na saarayd ayey ahayd oo waanu ka wadda sheekaysanay is faham wanaagsana runtii waanu yeelanay.
Ogaal: Laakiin, Xisbiga KULMIYE mar walba wuu ogolyahay wadda hadalka, balse dhiniciina xisbiga UDUB ayaa diidan markaa waxaad ka wada hadlaysaan?
Wasiirka: Anigu diidmadaa ma ogi, UDUB-na waa u diyaar. Maanta ma doonayo inaan duro xisbiga KULMIYE, wada hadalkii u danbeeyey UCID iyo UDUB ayaa ogoleyd, welina miiskii sidii ayay UDUB u fadhidaa oo mar kaliya may diidin aan isu nimaadno.
Ogaal: Hadda kullan danbe ayaa u balan-san tihiin idinka iyo Xildhibaanadu maxaad kaga sii wadda hadlaysaan?
Wasiirka: Waxa weeye, maadaama talada dalka in loo midoobo iyo in la wadda tashado ay tahay, bari, sahandanbe iyo waqti wal oo aanu jaanis isu helo xildhibaanada waanu is arkeynaa, xisbiga KULMIYE Golihiisa fulinta (Cabinet) iyo odayaashiisaba waanu is arki karaa, dan baa naga dhaxaysa oo tallo ayaa naga dhaxaysa. Markaa, waanu sii wadanaynaa sheekadayadii oo intayadan oo qudha maahee wasiirada kale iyo xildhibaanada ama xisbiyahanada kale ee KULMIYE cid waliba cida ay is faham la sameyn karaan ama ay wada hadli karayaan inay wada hadlaan, inay UDUB iyo UCID wada hadlaan, inay UDUB iyo KULMIYE wadda hadlaan dee qaran kaliya ayaynu nahayoo wax inoo diidani ma jiraan. Markaa, taas waanu fulineynaa, laakiin arrin awood la noo siiyey oo labadayada dhinac loo xilsaarey gaar ah ma jirto’e, laakiin xil-kii na saaraa ee qaran-nimo ee anagaba waajibka nagu ahaa ayaanu gudaneynaa. Haddiise wax midho dhal ah oo wanaagsan aanu isla gaadhno, waa khasab in qolo waliba u geyso madaxdeeda iyo odayaasheeda oo ay la kaashato.
Ogaal: Wasiir dhanka kale haddii aynu eegno, waxa Caawa (Xalay) ilaa maanta soo baxayey oo la isla dhex-marayey, warar sheegaya in Madaxweyne Rayaale xanuunsanayo oo uu dibada u baxayo iyo qaar sheegaya inuu is casilayo, arrimahaa maxaad kala socotaa?
Wasiirka: Yaahuu baan ka leeyahay, Yaahuuuu. Habaar waa dibad.
Ogaal: Wax jira maaha miyaa?
Wasiirka: Caawa (Xalay) aniga ayaa Madaxweynaha ka imid, caafimaadkiisuna taam ayuu ahaa, meel uu tagayaana ma jirto. Waxaa aad I weydiisey ee ah wuu xanuusanayo, dibadana u baxayo ama is casilayo aniga ayaa cadeynaya inaanay waxba ka jirin.
Ogaal: Laakiin, is casilaadu ma jirto miyaa?
Wasiirka: Oo Adeer maxaa keeneyba dee.? Xaraj immika geliya iyo saacad dalka la yidhaa waa la is casilayaana kuma jiro, wadda tashina waanu leenahay. Markaa, warkaasi war sal iyo raad-toona leh maaha.